Uchapupu | Yangu Mota Kunze
Pasi Pose VeMotokari Vanotora kunze IMPORT NYANZVI Yakazara IVA kuyedzwa Mota yako ichaenderana zvizere muUK 30 Makore Ekuziva Ruzivo, Nyanzvi uye Rinoshanda. 4000+ Cars Dzakatumirwa Kunze Kubva kuSupercar kuenda kuSupermini - Tiri Nyanzvi!
Kuunza mota yeLHD kuenda kuUK uye kubata nemaitiro iwe pachako zvinogona kurira nyore kudzamara ndazoona kuti huwandu hwetepi tsvuku hwakabatanidzwa hwaigona kushandura izvi nyore nyore. Kutsvaga nekukurumidza paInternet kwakaunza akati wandei emakambani eBritish ane ruzivo nerudzi urwu rwebasa. Vaviri vandakataurirana vaisazopa fungidziro yemutengo unobatanidzwa mukuita dzakasiyana shanduko dzinodiwa kutevedzera zviyero zveUK, njodzi yandisina kugadzirira kugamuchira. Neraki ndakawana Mota Yangu Yekunze uye kubva panguva yandakaonana navo ndakaziva kuti ndawana vanhu chaivo. Mukati memaminetsi ekutanga kufona kwangu ndakagamuchira fungidziro yakadzama pamwe nemari chaiyo inogona kunge ichibatanidzwa, saka ndakafunga kuenderera. Pandakaendesa mota yangu kukombi yavo kuCastle Donington padhuze neDerby ndakaziva kuti ndainge ndaita sarudzo chaiyo sezvo paive nevatatu veFerraris neRoll Royce imwe pamberi pavo, yaive kambani yemhando yangu yerudzi rweToyota RAV4. Zvese basa nemaitirwo akaitwa akapera nenguva mumavhiki matatu andaive ndaudzwa, uye mutengo waive sekufungidzira kwekutanga. Asi zvakanyanya kupfuura mutengo unonzwisisika, chakanyanya kundifadza kwaive kubatsira uye kugona kwevashandi.
Waita hako Kuda uye nechikwata chako chakanakisa!
Porsche Boxster / VW Touareg / Honda Goridhe
Ini ndangopinza dzinoverengeka mota kubva kuAndorra kuenda kuUK.
Kutsvaga internet, kune zvakawanda chaizvo zvinonzi mazvikokota ekupinza vamiririri, vanozvirova dundundu kuti vanogona kubata neese maitiro eichi chiitiko, kubva mukuona kuti kuburitsa kwekutengesa kwakaringana kune ese maitiro ehurongwa hwekupinza: VAT, kugadzirisa kuUK kutaurwa, MOT, kunyoreswa, matriculation uye kutakura zvinhu kubva kuAndorra kuenda kuUK. Kufona kwangu kwekutanga kwakaratidza kuve netariro asi, mushure memazuva ekuwedzera kufona uye kudzingirira kusingaperi, kwakaguma nekushungurudzika kwakazara. Neraki, kuyedza kwangu kwechitatu kwakandiisa mukuonana naWill Smith weMy Car Import.
Zvese mushure meizvozvo zvaive nyore uye 'pachena kufamba'. Ivo vakatora hanya nezvese zvinhu zveichi chingave chinhu chakaomesesa maitiro - kubva kune yangu pachezvangu ruzivo, ndinoziva kuti mumwe asingagoneki mutariri wetsika, kana kamwe kadiki glitch mumapepa, pamuganhu weAndorra / Spain, zvinogona kukonzera mhirizhonga. Nekudaro, Yangu Mota Inotengeswa kunze kwenyika kutarisa kune zvakadzama yakave nechokwadi kuti hapana mhirizhonga yakadaro yaigona kuitika.
Motokari yega yega yaida zvigadziriso zvidiki, uye imwe mota yakangoerekana yagadzira chinetso cheinjini. Ivo vakatarisira uye vakagadzirisa zvese izvo zvinhu.
Izvo zvese zvakaitika nekukurumidza kupfuura zvandaifungidzira uye nekutaura chokwadi, zvakanyanya hupfumi kupfuura zvandaitarisira. Ivo vari kutondibatsira kutengesa yangu yakanaka 2006 Honda Goldwing!
Ndinoda kukutendai nerubatsiro rwenyu pakunyoresa mota dzedu - kunyanya musasa pamwe, sekufunga kwangu, kwete iri nyore.
Ndinokutendai imwe nguva zvakare
Nhanho yakanaka mubhizinesi rako
Ingori katsamba kekukurumidza kutaura Hombe Ndatenda kwauri uye kune vamwe vese timu.
Ndanga ndichishushikana nemota, ndinofunga waizviziva izvo !!
Kuudzwa nhasi kuti kwaive kuburikidza neiyo IVA bvunzo yaingova akanakisa nhau.
Ndatenda zvakare, maita basa rakakura uye ndinotarisira kutaura nekukuonai mese
Ini ndaida kunyora kukutendai uye nechikwata chako kuMyCarImport nebasa rakanakisa rawakatiitira. Iyo yese sevhisi yanga isina matambudziko zvachose kubva kuSydney kuenda kuCastle Donnington. Tinokurudzira mabasa ako kune chero munhu. Kutenda kuzhinji zvakare!
Jaguar E Rudzi 3.8
Mota yakasvika kumba kwangu mangwanani ano uye inotaridzika uye inonzwika kunge inoshamisa. Nguva huru.
Ndinoda kukutendai mose nerubatsiro nerubatsiro nekutakura, kutakura, kunyoresa kuUK nezvimwe zvese zvakafamba mushe pasina matambudziko uye nekukurumidza chaizvo.
Ini ndinofara kukurudzira iwe mese kune vamwe!
Kutenda iwe neboka rako rese nezvose zvawandiitira. Kutenda kwakawanda ndichaita bhizinesi rakawanda newe, mazhinji ndatenda.
Yakabata danho rakazara rekupinza yangu Porsche GT2016RS yangu ya3, kubva pakuendesa, ichiita kuti mota iwirirane kuburikidza nekuUK kunyoreswa nekukurumidza uye nekugona. Vakandichengeta ndichiziviswa uye ndikagadzirisa nhanho dzese dzenzira uye ini ndakanyanya kufadzwa! Mune mawonero angu, iyi ndiyo yega kambani yekufona kuti ironge kupinza mota. Kutenda kukuru kuna Kuda uye nechikwata nekuita rakanakisa basa uye ndichave ndichiita bhizinesi newe zvakare munguva pfupi iri kutevera.
Porsche 718 Cayman UAE kuUK
Kutenda nerubatsiro rwako mukuita yangu 718 Cayman kuitiswa, ini ndinokukurudzira iwe kushamwari dziri kufunga nezve kuendesa mota dzadzo kudzokera kuUK.
2016 Audi RS3 - Australia kuUK
Ndatenda zvakare nekuendesa mota yangu kubva kuAustralia magents.
Ndinokutendai zvakare nebasa renyu rose rakaoma.
Audi RS3 Australia kuenda kuUK
2013 Audi A3 - Republic yeIreland
Ini ndinogona kusimbisa kuti mapepa ese nemahwendefa asvika.
Zvino, mushure mekunge izvi zvapedzwa chaizvo nekukurumidza, ndinogona kungokutendai nebasa renyu rakatanhamara, rakatanhamara.
Ndiri test text block. Dzvanya bhatani bhatani kuti uchinje chinyorwa ichi.
Ingotambira mota, zvese zvinotaridzika zvakanaka. Ndinokutendai zvakare nebasa rinoshamisa, maita kuti hupenyu hwangu huve nyore uye muchange muchikurudzira kambani yenyu kune vamwe.
Ingo meseji inokurumidza kutaura kuti yakadii sevhisi.
Iwe wakabata chaizvo zvese zvakanyatsonaka. Mushure mekuona zvinodikanwa zveDVLA yaive zororo rakakura kukuendesa kwauri uye kuti igadziriswe nemazvo.
Honda Jazz - Nyuzirendi
Ini ndanga ndichida kungotenda iwe nevashandi vako nekutora izvo zvakava zvinonetsa kwandiri zvekuunza mota yangu kuUK. Ndakaona kushambadza kwako painternet uye ndikaverenga zvipupuriro uye presto mukati memazuva mashoma ekutaura newe, Yangu Mota Yekutakura yakanga iine zvinhu zviri kuitika.
Ini ndinokurudzira chero munhu kuti anyatsofunga vasati vatumira mota yavo kuenda kuUK - kutora My Car Import kuti vatore kubva kuPort uye kubata nezvinodiwa nehurumende yeUK. Vakanga vakanaka.
Nissan Navara - Chamhembe Afrika
Ini ndinonzwisisa kuti kunyangwe mota yangu iri kure nekuve iyo yakafanana yezvemari ligi seyaunowanzo shanda nawo, zvaive pachena kuti yakagashira yakaenzana kuchengetwa nekutarisirwa.
Ndinokutendai kwamuri, baba venyu naJade nekuchengetwa uye kutarisirwa kwandakaitwa panguva yese iyi.
Kubva pamhinduro yekutanga kumubvunzo wangu kuburikidza newebsite yako kusvika pakuendeswa kwemotokari, ini handigone kufara uye ndingakushandise nemufaro uyezve kukuendesa kushamwari.
2015 Mitsubishi Pajero - Dubai kuUK
2015 Kia Picanto - Ireland kuUK
Ndinokutendai zvikuru nekugadzirisa speedometer yangu uye nekuunza mota yangu. Ini ndinotenda chose kuwedzera kwekuwedzera kwawakaenda iwe. Ndatenda nebasa rakanakisa!
Suzuki Grand Vitara - NL kuUK
Mahwendefa asvika uye mota yave kubvisirwa mutero inishuwarenzi uye zviri pamutemo. Kutenda iwe nekambani nebasa rakakosha.
Zvinotaurwa nemutengesiToyota FJ Cruiser - Australia
Ndinokutendai nekuchengeta kupinza kwemota yangu. Ndinoziva zvaive zvakanyanya kunetsa, asi nekuda kwevatauri vako vakakwanisa kuwana zvikamu zvakanaka uye kugadzirisa nyaya dzese nekukurumidza uye zvinogutsa. Ini handizeze kukurudzira masevhisi ako.
2015 VW Multivan -Australia kuUK
Kutenda zvakanyanya zvakare nekurongedza zvese kwandiri, uye ndisingakwanise kufungidzira kuti zvaizonetsa sei dai ndaifanira kuzvirongedza zvese ndega. Inishuwarenzi yangu yese yakarongedzwa uye zvese zvakanaka. Ndatenda.
Ndinokutendai zvikuru nekugadzirisa motokari yangu, mahwendefa akaiswa, inishuwarenzi yakagadzirirwa uye ini ndiri munzira nayo zvakare, ndakafara kwazvo. Ndatenda zvakare, basa guru,
Ndinongoda kukutendai nebasa rakakura, ndinokukurudzirai kune chero shamwari dzinofunga kuunza mota dzadzo mune ramangwana!
Ndatenda Jack, ndiri kufara kwazvo nerubatsiro rwako rwese nebasa.
Sydney - E Rudzi
Huye E Type iri pamba, achigara mubhuvhu rake akaitwa mazana mazana emakiromita uye anga ari kuGoodwood festival yekumhanyisa uye akakonzera kunyongana muVIP mota park. Kutenda nekumuwana iye asina kurwara Jack, ndinonyatso kuonga.
Kutenda nebasa guru rakapihwa.
Ndatenda zvikuru nerubatsiro rwako, wanga uri mufaro kubata newe.
Uye ndinokutendai mose Jade naJack nezve zvese! Wanga uri mukuru mukuita kwese uye waita izvo zvakatanga senge zvinoshungurudza maitiro ari nyore kwazvo uye anodhura. Ndingakurumbidza nemufaro zvakare kune chero munhu wandinoziva anoda masevhisi ako!
Justine Van kuenderana
Kungokurumidza katsamba kutaura maita basa. Ini pakutanga ndaive nehanya nekuunza chimwe chinhu pamusoro uye vamwe vatakuri vandaitaura navo vakafukidza icho chinhu chose mukuvanzika. Kubva pakubata kwandakaita kwekutanga kusvika pakuendesa kumba wakazviita nyore uye ukaita basa rese nemutengo wakanaka. Ndave nedambudziko rakawanda rekutora mota dzekumba kuUK!
Ingori tambo yekutenda imi mese nebasa rakanaka ramakaita mukuunza mota yangu kuUK. Ndingadai ndisina kuzviita pasina iwe. Kutenda kwangu hakuzivi miganhu. Mwoyo murefu wako neni uye nerubatsiro rwako rwese munzira rwakanyanya kufarirwa. Kambani yako inokurudzirwa zvakanyanya neni kune chero shamwari dzangu uye vandinoshanda navo vanoda masevhisi ekupinza mota.
Pauline kuenderana kwekuedzwa pamwe nemamwe mazita okutanga
Kungo taura kuvonga kukuru nerubatsiro rwese nekutenga, zvinokosheswa chaizvo uye ini ndichaparadzira izwi.
Kutenda zvakanyanya kune rako rese basa - rinonyanya kukosheswa uye iwe wakanyatsogadzirisa akawanda matambudziko. Ndiri kufara kwazvo kuve nemotokari yangu zviri pamutemo kutyaira munyika ino.
Itari - Honda mudhudhudhu
“Ndinotenda zvakare nebasa rakanaka zvarakapihwa. Ndataura nezveKambani yako kune dzimwe shamwari shoma dziri mumamiriro ezvinhu akafanana neni uye vanogona kutora basa rako kushandura ndiro yavo yekunyoresa. ”
“Hatigone kukurudzira Car My Import zvakanyanya zvakakwana. Pakutanga, isu takafunga kuti kugadzirisa Kia Sedona yedu yekutyaira mumigwagwa yeBritish yaive nyaya yekutora tsamba yekuvhavha nekukurumidza, kugadzirisa mwenje uye kujoina mutsara kuti uwane kunyoreswa kweUK pamusoro pekambani. Takatadza zvakadii, kurwa chaiko kwaive neveMotokari uye Yevashandisi Vemabasa (VOSA). Mutengesi weKia wemuno akaita nepaanogona napo, nekupa kutsiva iyo yose yemwenje masisitimu (kwemamwe maUS $ 400) asi izvo zvakasiya tambo imwe yakaturika, iyo yaisazobvumidzwa, kunyangwe ikaiswa pamusoro. Akatitumira kugaraji diki padhuze neUS Air Force base, iyo yaishandiswa kugadzirisa mota dzekuNorth America, asi vaive varega, nekuda kwekuomarara kweVOSA uye nekuchinja mitemo nguva dzose. Ivo vakatinongedzera kuna Jack, kuMy Car Import. Mwedzi miviri kusvika pazuva rakatevera ratora mota yedu kubva kuLockpool dock, Jack aive akagadzirira isu, UK-yakanyoreswa, VOSA-yakatenderwa uye yakapihwa marezinesi. Basa ratakapihwa naJack Charlesworth raikosha kwazvo. ”
ZVINOKOSHA MICHAEL SKLIROS
“Jade Williamson nechikwata cheMy Car Import vakabata kunze kwenyika kweLandrover yangu zvine hunyanzvi uye hunyanzvi. Ndinotenda zvikuru nerubatsiro rwavo rwakakosha uye rubatsiro sezvo ivo vakakwanisa kuita kuti kureba kwekutora kuite sekusina basa zvachose. Mutori wekunze wandaigona kuve ndakashuvira uye kukosha kukuru kwemari! ”
“Nguva pfupi yadarika takabva kuBelgium kuzogara kuUK. Isu taida kunyoresa mota yedu yeBelgian kuUK, uye isu takaedza kutanga maitiro isu pachedu. Zvisinei isu takasangana nematambudziko mazhinji munzira zvekuti takasiya. Ipapo isu takave nepfungwa yekuhaya Yangu Mota Kunze kuti tiite maitiro isu. Yangu Mota Kunze yakaita kuti isu ive bespoke quote uye zvinyatsotaura magwaro aidiwa pakuita. Vashandi vaigara vachipindura mibvunzo yedu neemail kana nefoni nenzira ine hushamwari uye inokurumidza. Maitiro ese akapedzwa nekukurumidza izvo zvataitarisira: mwedzi miviri mushure mekubata My Car Import, takagamuchira gwaro rekunyoresa kubva kuDVLA. Pakazara takafara nebasa ratakatambira kubva kuMy Car Import. ”
Spain - VW Gorofu
“Ndangoda kunyora nekukutendai nemabatirwo akaitwa sangano renyu nekutengwa kwemota yangu. Vashandi vako vaibatsira uye vane hushamwari uye vaichinjika zvakakwana kuzadzisa zvatinoda. Kutenda kukuru nerubatsiro rwenyu uye handingazeze kukurumbidzai kuti mushumire vamwe. ”
"Ndiri kungoda kukutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu nekutora maDuchess eAudi kubva kuNew Zealand kuenda kuWoburn, ndinokutendai nekutsungirira mibvunzo yangu yakawanda, maemail uye nhare !!"
“Ndinoda kutora mukana uno kukutendai nechikwata chenyu nebasa repamusoro soro rakapihwa maringe nekuunzwa kwemota dzangu mbiri. Iko kugona, kushanda uye hunyanzvi zvaive zvemhando isingawanzo kuve neruzivo mazuva ano. Ini ndanga ndafungidzira kuti kupinza mota dzichava chinetso chaicho - kunyanya kudonhedza kuburikidza newebsite yeDVLC! Saka yekupedzisira-kumagumo sevhisi yakapihwa neMSI yakaratidza kurerukirwa kukuru uye kupfuura kusangana nezvandaitarisira kune izvo zvandinoona semutengo unonzwisisika. Ndingadai ndisina kuzeza kukurudzira MCI kune vamwe. ”
JOHN S. MIRIRI
Mutevedzeri weMutungamiri - Shell Global Trading
“Ndinongoda kukutendai uye nechikwata nerubatsiro rwenyu rwusinganeti mukuunza kunze kweLand Cruiser yangu kubva kuFinland. Ini ndanga ndakatarisira maze ezvematambudziko asi maitiro ese akafamba pasina chinorova kana mari hombe nekuda kwehunyanzvi hwako. Ini ndakazotenga nekutengesa mota kuburikidza newe uye zvese zvakatariswa nenzira yepamusoro yehunyanzvi ine yakanakisa mushure mekutengesa. Ndingadai ndisina kana kana chamunombopokana nacho mukurumbidza iwe nechikwata uye zvirokwazvo ndinotarisira ramangwana bhizinesi newe. ”
“Mota yaendeswa zvakanaka nenguva dza 12.30 pm nhasi maita basa. John naMaria vaityisa! Ndanga ndichirwara nedisc rakatsvedza kwemavhiki matanhatu apfuura saka ndaisakwanisa kuita zvakawanda kubatsira. Vakagadzirisa zvese. Ose mana mavhiri aive akaputika matai saka ivo nemutsa vakapomba matatu uye vakachinja chechina cheparip vhiri ini yandaive ndinayo. Vakabva vaburutsa mota ndokuisa mugaraji mangu. Zvese zvinobatsira kwazvo. Ndinokutendai zvikuru nebasa rakanaka. ”